နိုင်ငံရေးသမားများက လျှပ်စစ်မီတာခ ဈေးတက်မည်ဟု ပြောကြားမှုများကြောင့် သြစတြေးလျတွင် ဆိုလာ? - Yangon Media Group
ကင်ဘာရာ၊ ဇူလိုင် ၁၉
နိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်မီတာခများဈေးကြီးလိမ့်မည်ဟု နိုင်ငံရေးသမားများ၏ပြောဆိုမှုများက သြစတြေးလျ၌ နေရောင်ခြည်သုံးဆိုလာပြားများ ရောင်းအားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနေကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ဇူလိုင် ၁၉ ရက်၌ပြောကြားလိုက်သည်။ သြစတြေးလျတွင်ဆိုလာပြားတပ်ဆင်မှုသည် ၂ဝဝ၇- ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ၌ အိမ်ထောင်စု၏ သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိရာမှ လက်ရှိ တွင် ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်လာပြီး ယင်းမှာ အရေအတွက်အား ဖြင့် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၄ဝဝဝ မှ ၁ ဒသမ ၈ သန်းအထိ ဆိုလာ ပြားများသုံးစွဲလာကြခြင်းဖြစ် သည်။
အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ဈေး ကွက်ဒါရိုက်တာနှင့်ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုး မြဲစွမ်းအင်သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ စရစ်စတန်အက်ဒီးစ်က ယခုကဲ့သို့ တိုးတက်လာမှုသည် စွမ်းအင်ဈေး နှုန်းများ ကြီးမြင့်လာလိမ့်မည်ဟူသော လူ ထု၏နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကြောက်ရွံ့ မှုများကြောင့်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သြစတြေးလျတွင် ၂ဝ၁၃ မှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အထိ ဝန်ကြီးချုပ်အ ဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူတိုနီအက် ဘက်တ်သည် ဆိုလာပြားများပြည် သူများအလျင်အမြန်ဝယ်ယူသုံး စွဲကြခြင်း၏ အဓိကလက်သည်တစ် ယောက်ဟု အက်ဒီးစ်က ဆိုသည်။
”အက်ဘက်တ်က ဆိုလာကုမ္ပဏီတွေအတွက် အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက် လို့ ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်။ သူက လူတွေကို ကြောက်အောင်ခြောက်ခဲ့တယ်။ လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းတက် လိမ့်မည်လို့ သူလျှောက်ပြောခဲ့တာ တွေဟာ လုံးလုံးကိုမှားယွင်းခဲ့ တယ်”ဟု အက်ဒီးစ်က သြစတြေး လျရုပ်သံထုတ်လုပ်ရေးကော်ပို ရေးရှင်း (ABC) သို့ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
”အက်ဘက်တ်က လူတွေကို မီတာခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြောက်လန့်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ မီတာခတွေတက်ရတဲ့ တကယ့်အ ကြောင်းရင်းကို သူရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြောခဲ့ဘူး။ လူတွေက ဘာတွေ ဖြစ်နေမှန်းလဲမသိတော့ ဘာက ဒီ ပြဿနာကိုအလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်း နိုင်မလဲလို့တွေးကြရော။ အဲဒီမှာ ကိုယ့်လျှပ်စစ်ကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးလာ ကြတာပါပဲ”ဟု အက်ဒီးစ်က ပြော ကြားခဲ့သည်။
မိုဘိုင်းပန့်ဖြင့် စက်သုံးဆီများ တရားမဝင်ရွေ့လျားရောင်းချသူများကို စီမံချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီ?
ဒါရိုက်တာ/သရုပ်ဆောင် ကျော်သူနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
တပ်မတော်အရာရှိအယောင်ဆောင်ပြီး မူဆယ်မြို့၌ ရွှေမိုးပွင့်အေးကုမ္ပဏီရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခြင်းနှ?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပြည်နယ် ၃၆ ခုသို့ တုပ်ကွေးရောဂါ ပျံ့နှံ့နေ